ओलीको ग्ल्यामरबाट लठ्ठ म ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठविचार समाचारओलीको ग्ल्यामरबाट लठ्ठ म !
बनिता खनाल– म एक उदारवादी सोचकी महिला हुँ । राजनीतिबाट निरपेक्ष छु । राजनीतिका वाद वा सिद्धान्त, दलहरूका संगठन वा अनुशासन मेरो मतलबका विषय होइनन् । समाजमा प्रदर्शित विचार वा व्यवहारप्रति खुल्लमखुला टिप्पणी गर्ने गर्छु । मेरो टिप्पणीले कसलाई नाफा वा घाटा हुन्छ, मतलव पनि छैन ।
कोरोनाका बेला ‘बेसार पानी र हाछ्युँ’ जस्ता कुरा गरेर ओलीले तर्क दिँदा मलाई उनी बकवास कुरा गर्छन् जस्तो लागेको थियो । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर यस्तो हल्का कुरा गरेको देखेर मैले पनि सामाजिक सन्जालमा खुलेर बिरोध गरेको थिएँ । त्यो तर्कलाई आज पनि म स्वीकार्न सक्दिनँ ।
जति उनका सम्वादहरू सुन्थेँ त्यति धेरै उनीसँग रिस उठ्थ्यो । मैले प्रमको भाषण र अन्तर्वार्ताहरू ढुकेरै सुन्ने गरेकी थिएँ । उनले कहाँ गल्ती बोल्छन् र सामाजिक सञ्जालमा त्यो कुराको विरोध गरूँ भन्ने हेतुले हेर्थेँ र मन नपर्ने कुरा गर्नासाथ उनको विरोधमा ठोकेर लेख्ने गर्थेँ पनि ।
यस प्रश्नमा प्रम ओलीको उत्तर थियो ‘हज्जारौ छन् र अरु पनि निस्किन्छन् ।’अन्तर्वार्ताको अन्तिमतिर सोधिएको प्रश्नको उत्तरले ओलीप्रति मेरो सम्मान जाग्यो ।ओली आफैँले मेरो विकल्प छैन भनेका छैनन् । उनी कसरी घमण्डी भए ? पदकै लागि राजनीति गर्नेहरूलाई हामीले किन साथ दिने ? हामीले किन भइरहेको सरकार ढाल्ने ? ओली कुरा लुकाउदैनन्, उनी सबै कुरा प्रष्ट भन्छन्, उनलाई मिडियाले के भन्ला भन्ने डर छैन ।
कुर्सीमा बसेको भोलिपल्टदेखि कुर्सी जोगाउने अभियान सुरु गर्न नेपाली नेतालाई बाध्य बनाइन्छ । यी ठूला मिडियाहरूले ढुक्कसँग देशको लागि काम गर्न दिँदैनन्, जनता भड्काउँछन् ।मलाई पछिल्लोपटक त के लागेको छ भने, आजसम्म नेपालमा ओलीजस्तो उच्च मनोबल भएको प्रम थिएन र सायद भविष्यमा पनि सायद नहोला ।
दुईपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका उनलाई के कुराले यति धेरै ऊर्जा र जाँगर दिन्छ होला म छक्क पर्छु । म आफू पनि बिरामी भएका कारण उनको आत्मबल देख्दा खुसी हुन्छु ।नेताहरूका अनुहारमा देखिने गम्भीरताको म कहिल्यै सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्नेमा विश्वास गर्दिनँ ।
बरु उनीहरू लोभी, स्वार्थी र आत्मविश्वासबिहीन छन् भन्ने लाग्छ । जहिले पनि ठुस्स परेर बस्ने उनीहरूबाट कसरी जनता खुसी हुन सक्छन् ? ओली उनीहरूभन्दा फरक छन् । जहिले पनि चिटिक्क, हँसिलो, ग्ल्यामरस मुद्रा प्रस्तुत हुने जोश–जाँगर उनीमा कताबाट आउँदो हो ?
उनले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएका छन्, नयाँ नाम दिएका छन् । ‘आइ हेट पोलिटिक्स’ भन्ने म जस्ता युवाहरू प्रमको भाषण सुन्छन्, उनको बोलीमा नै नशा भएकोजस्तो महसुस गर्छन् ।आजसम्म अँध्यारो अनुहारका, हाँस्न र हँसाउन नजान्ने कथित सिरियस प्रधानमन्त्री मात्र देखेका नेपालीले पहिलोपटक रसिक स्वभावका प्रधान्मन्त्री पाएका छन् । अन्त्यमा यति भन्न चाहन्छु, ओलीले नेपालको राजनीतिमा ‘ग्ल्यामर’ थपेका छन् ।